Nhanga Mbeu: Ziva zvese zvakanakira uye maitiro ekuishandisa!
Zucchini Lasagna: Tsvaga akanakisa mapikicha kuti izvi zvifadze!
Zvokudya	 15 January 2019
Nhanga Mbeu: Tsvaga mabhenefiti uye dzidza kuishandisa nenzira kwayo!
A manhanga mhodzi yakave yakakurumbira munyika yese nekuda kwebhenefiti yayo kune hutano, kugara zvakanaka uye zvakare nezve vanhu aesthetics. Parizvino, inoongororwa nevanoverengeka vaongorori vanotsvaga mumbeu iyi mhinduro kumatambudziko mazhinji.
Mune inotevera misoro iwe uchaziva zvese zvakawanikwa pamusoro pemhodzi mhodzi, ayo chaiwo mabhenefiti, mashandisirwo ayo uye rumwe ruzivo rwakanangana nezve chinhu ichi. Buda!
Mbeu yemanhanga, iyo yakamboraswa pakugadzira dhishi nemuriwo, yakazoshandiswa zvakanyanya, nekuda kwemishonga yayo uyezve nehutano.
Vanachiremba nevatsvakurudzi vakawana mumbeu iyi sosi yakakosha zvikuru yeprotein, iyo yakanaka pakusimbisa mhasuru, kusimbisa mitezo, uye kutetepa.
Pumpkin mbeu zvakare yakapfuma mu magnesium, munyu wemunyu wakakura wekugadzirisa mashuga eropa, BP uye kupa simba kumasero.
Dzimwe bhenefiti dzakatowanikwa ndedzekuti mbeu yemanhanga inodzivirira immune system, inobatsira hutano hweprostate muvarume, hunovandudza manzwiro, hunobatsira kurara mhando uye yakafuma mune antioxidants inogeza muviri wako uye inoita kuti chiropa chako chishande sezvachinofanira kuve.
Svika pakuziva zvese zvakanakira mhiripiri futi!
manhanga mbeu yemafuta
Iyo yakanakisa uye yakajairika ndeyekudya mbeu pachadzo, dzakatorwa mumanhanga ndokuiswa musalad kana imwe dhishi, asi zvakare kune mafuta emhanga yemanhanga, ayo anogona kushandiswa muchikafu kana kutopfuudza paganda uye ganda. .
Mafuta anowanzo gadzirwa nemanhanga akakosha anonzi Styria uye ane mabhenefiti akafanana nembeu mbishi yaunotenga paunotenga manhanga pamusika kana musupamaketi.
Kana iwe uchida kushandisa mhodzi dzemanhanga, iro zano rekutanga nderekuishandisa mbishi, pasina fries, kunogocha, kubika, kana zvimwe zvakadaro. Izvi zvinodaro nekuti midziyo yembeu iri nani kana iri mbishi. Kuchenesa mbeu kunogona kukonzera kuti irasikirwe neimwe kana yakawanda yeaya manyuchi.
Nekudaro, yakanyanya kuwanda ndeyekuparadzanisa mbeu uye kugadzirira inotonhora saladhi navo. Iyi saladhi inogona kunge yakanyanyisa kupisa, iine mavara, iine mashizha, miriwo uye michero uye inopedzwa nembeu dzemanhanga.
Rimwe zano kupwanya mbeu nekuisa muzvikafu zvakagadzirwa pamwe nemadishi, senyama, mupunga, kana sosi inonakidzawo.
Iwe unogona kudya iyo manhanga mbeu mune yayo yakasvibirira fomu, kuburikidza nendiro uye mabikirwo ayo anoshandisa ichi chinonaka, kana iwe unogona kuidya kuburikidza nemanhanga embeu yemafuta kana nekutora zvekudya zvinowedzera zvinoshandisa manhanga mbeu sehwaro.
Idzi ndidzo sarudzo nhatu huru dzaunofanira kudya mbeu zuva nezuva uye kuwana mabhenefiti ose ainounza. Zano rakakosha nderekusawedzeredza, mbeu shoma pazuva kana kashoma pavhiki inodarika zvakakwana. Huwandu hwepamusoro hwezuva nezuva hunogona kutokuita iwe mafuta, sezvo iine macalorie akawanda.
Mbeu yemanhanga inoonda here?
Mbeu yemanhanga ine hupfumi muprotein, potasium nemagniziyamu uye zvese izvi zvinobatsira mukugadzirisa nekusimbisa mhasuru, iyo inonzi yakakora yakaonda uyezve mukubvisa mafuta, mafuta akawanda. Kana ikadyiwa mune yakaderera huwandu, inogona kukubatsira iwe kurasikirwa uremu.
Dambudziko nderekuti mbeu yemanhanga yakakwira mumacalorie, saka kana ukadya zvakawandisa, mhedzisiro yacho ichave iyo yekumashure, iwe uchawedzera huremu pane kurasikirwa uremu.
Iyo yakanakisa nzira yekushandisa yako manhanga mbeu kugadzirira ane mavara, akasiyana saradhi ane zvakawanda zvigadzirwa.
Lettuce yeAmerica, red lettuce, arugula, cherry madomasi, mango, maorivhi matema, chibage, karoti uye mbeu yemanhanga kupedzisa. Zvese izvi zvakarungwa nemunyu, mafuta uye ndimu. Iyo inonaka, yakatonyanya kusanganiswa nenyama yakanaka.
Mbeu dzemanhanga dzinogonawo kupwanywa uye kusanganisirwa mumuto kana kushandiswa seyakagadzirwa yekunze mushure mekugadzirwa kwechikafu. Iwo zvakare makuru sarudzo kuti iwe ushandise iyi spice.
Kana iwe waifarira aya matipi nezve mhodzi yemanhanga, govera iyi chinyorwa pane ako masocial network!
Kutenderera: Zvinodzora huremu? Kutanga sei? Ndiani akakodzera?
Cellulite majusi: Ona akanakisa mabikirwo!
Organic Chikafu: Ndeapi iwo? Ndezvipi zvakanakira?
Hushamwari kudzikira huremu
Tea Muti Oiri: KUGUMA kweMapundu! Nzwisisa kuti nei zvichishanda!